UMsunduzi: Inhlokodolobha yemicimbi yezemidlalo – Msunduzi News
UMsunduzi: Inhlokodolobha yemicimbi yezemidlalo
Yize uMsunduzi ulokhu ubhekene nezinselelo eziningi zenhlalo njengokungasebenzi kwabantu kodwa uphuma phambili uma kuziwa ekusingatheni imidlalo esemqoka futhi ukhiqiza osaziwayo bomhlaba abasezingeni elikhokhelayo.
Kusukela kudala, umlando ukhombisa ukuthi idolobha iPietermaritzburg, eliphansi kwesifunda uMgungundlovu esiholwa yiMeya uThemba Njilo, lisingathe imicimbi eminingi – kubalwa naleyo engabathinti kangakho aboHlanga.
Omunye wemijaho edumile futhi osunesikhathi eside ukhona iComrades Marathon isiyasingathwa yileli dolobha iminyaka ecela ekhulwini kusuka uqala ngowe-1921. Uqala uphelele ePietermaritzburg naseThekwini ngokunikezelana minyaka yonke. Ungomkhulu kunayo yonke ekhona.
Ngenxa yokukhathaza enyameni nasemqondweni kwabawungenele, ungumjaho womhlaba wonke nonedumela ngokuheha abagijimi hhayi kuphela ezwenikazi i-Afrika kodwa nasemhlabeni jikelele.
Omunye umdlalo ongxabo zawo zisePietermaritzburg nowaziwa umhlaba wonke ngokuthi Amashovashova, wumjaho wamabhayisikili onzima ohlanganisa inhlokodolobha yemidlalo nedolobhakazi iTheku. Lo mdlalo waqala ngowe-1986 kanti uba khona njalo ngoMfumfu. Wona awufani neComrades Marathon, amadolobhakazi awanikezelani ngokuqala nokuphetha kwawo.
Ngesikhathi samaholide kaZibandlela nangesikhathi sokubuyela kwabantu emsebenzini ngoMasingana, kuhlale kuphithizela ePietermaritzburg ngalesi sikhathi sokuqala komncintiswano wezikebhe oqala eCamps Drift emfuleni uMsunduzi uze uyophelela eThekwini Emfuleni uMngeni. Lona ungeminye yemidlalo eyenza la madolobhakazi abe yinto eyodwa. UMnyango Wezemidlalo Nokungcebeleka oholwa ngesinono uMhlonishwa uBongi uMaSithole-Moloi awudingi ukuba ulokhu uqageliswa ukuthi uzizwa kanjani ngale midlalo emqoka. Lokhu kungenxa yokuthi ilokhu iqhubekile ibeka eqhulwini hhayi amadolobhakazi kuphela kodwa iKwaZulu
Natal yonkana ebalazweni lomhlaba. kungalesi sizathu lo Mnyango ulokhu uqhubekile usekela ngezimali le midlalo minyaka yonke.
Kwaqopheka umlando ngowezi-2003 ngesikhathi iPietermaritzburg Oval isingatha iNdebe YoMhlaba Yekhilikithi lapho iProteas yadlala khona neKenya neZimbabwe. Ekugcineni i-Australia yanqoba kule midlalo ngokushaya i-India emdlalweni wamanqamu ongumlando.
Uhlu lwemidlalo yomhlaba ebanjelwa eNhlokodolobha lude futhi iBMX Racing World Championship ngomunye wemidlalo eyengeza kulolu luhlu. Lo mdlalo waminyaka yonke uba sePietermaritzburg ngowezi-2010.
Omunye umdlalo osemqoka wokubhukuda olumbaniswa nePietermaritzburg yiMidmar Mile oba minyaka yonke ngoNhlolanja osingatha i-Open Water Swimming onababhukudi ababa ngaphezu kwezi-16 000 kanti nababhukudi bamanye amazwe basuke beyingxenye yawo.
Uma sibheka izinkundla ePietermaritzburg iHarry Gwala iphuma phambili. Le nkundla yaqanjwa ngoMnu uHarry Gwala owayephambili emzabalazweni. Le nkundla iyikhaya leMaritzburg United edlala kuPremier Sosccer League (PSL).Uhlu lomakadebona kunobhutshuzwayo abadabuka eMsunduzi lude njengoba bebaningi abadlale kuPSL
Next post: UMsunduzi isithako esimqoka ebholeni lakuleli